चिनीजन्य खानेकुरा सेवन नगर्दा मधुमेह लाग्दैन भन्ने जमात पनि कम छैन । जबकी मधुमेहको कारण चिनीजन्य खानेकुरा मात्र होइन । मधुमेह हुनुमा वंशानुगत र अन्य कारण बढी जिम्मेवार हुन्छ । यद्यपी मधुमेहले ग्रस्त भइसकेपछिको अवस्थामा गुलियो …
डा अनिल यादव मधुमेह के हो ? शरीरमा ऊर्जा उत्पादनको लागि ग्लुकोज अति आवश्यक हुन्छ। ग्लुकोज शरीरको कोषभित्र छिर्न इन्सुलिन हार्मोनले सहयोग गर्छ। जब शरीरमा इन्सुलिन हार्मोन उत्पादन रगतमा...
जब हर्मोनको सन्तुलन बिग्रन्छ
हार्मोन भनेको कुनै कोष वा ग्रन्थीबाट उत्पादन हुने रसायन हो जसले शरीरको अरु भागमा रहेका कोषहरुलाई प्रभावित गर्छ । शरीरको मेटाबोलिज्म र रोग प्रतिरोधी प्रणालीमा हार्मोनको सोझो प्रभाव हुन्छ । हाम्रो शरीरमा सैयौं किसिमका हार्मोन हुन्छन् …
विश्वभरमा इन्सुलिनको कमी किन भइरहेको छ ? मधुमेह रोगीले के गर्ने ?
मधुमेहलाई खराब शहरीया जीवनशैलीको उपज मानिन्छ । टाइप २ मधुमेहको समस्या भएका मानिसको रगतमा रहेको सुगरको मात्रा नियन्त्रण गर्न पर्याप्त मात्रामा इन्सुलिन पैदा हुन पाँउदैन । वैज्ञानिकहरुका अनुसार टाइप २ मधुमेहको शिकार भएका लाखौं मानिसहरुलाई आउँदो दशक …
अनलाइनखबर कार्तिक २०७५
तपाईंलाई मधुमेह छ ? त्यसो भए बेलुकाको खाना चाख्नुहोस् मात्रै
चिनी खाँदैमा मधुमेह अर्थात चिनी रोग लाग्ने होइन । धेरैको बुझाई चिनी धेरै खाएर लाग्छ भन्ने छ, त्यो धारण गलत हो । सबैभन्दा पहिले त्यो धारणा हटाउनु पर्छ । रगतमा सुगर बन्ने पदार्थ सबैको हुन्छ । यदि चाहिनेभन्दा बढी छ भने कोष भित्र शरीरमा पठाईदिन्छ । इन्सुलिनको माध्यमबाट कोषमा जान्छ । र रगत नाप्दा एउटै लेबलमा आउछ । जब यो गर्न सकिं...
ओखतीको कुराः मधुमेह नियन्त्रण गर्ने १५ उपाय
मधुमेह, जसले अहिले धेरैलाई भयाभित बनाइरहेको छ । मधुमेह आफैमा यस्तो समस्या हो, जसले शरीरमा अन्य समस्याहरु पैदा गरिदिन्छ । तथ्यांकले भन्छ, पछिल्लो समय मधुमेहको रोगी बढ्दैछ । मधुमेह भन्नसाथ बुढापाकाको रोग भनिन्थ्यो । ६०/७० बर्ष …
कुनैबेला यस्तो थियो, पाको व्यक्तिलाई मधुमेह हुने । अहिले वयस्क होइन, युवादेखि बालबालिकामा समेत मधुमेहको समस्या छ । किनभने मधुमेह कुनै उमेरसँग सम्बन्धित रोग होइन । बरु, जीवनशैलीसँग सम्बन्धित समस्या हो । खराब जीवनशैली र …
मधुमेहमा किन हुन्छ हृदयघात र स्ट्रोकको जोखिम ?
अहिले धेरैले भोगिरहेको समस्या हो, मधुमेह । खराब खानपान र जीवनशैलीको कारण मधुमेहले धेरैलाई गाँजेको छ । मधुमेह, जसलाई नियन्त्रण गरिएन भने त्यसले मुटुमा असर पुर्‍याउन सक्छ । त्यही समस्याको कारण हृदयाघात तथा स्टोक हुने …
लामो समयसम्म अनियन्त्रित रूपमा चिनीको मात्रा बढी भैरहे त्यसले रक्तनसा अनि स्नायुलाई हानि पुर्‍याउँछ । पछि गएर यसको नकारात्मक प्रभाव यौन उत्तेजना, महिलामा योनि रसाउने वा पुरुषको लि· उत्तेजनामा पर्छ । लि·मा रगत भरिन ठीक समयमा नाइट्रिक एसिड नामको रसायन निस्कन्छ, जसले रक्तनसाका मांसपेशीलाई खुकुलो हुन रसायनिक सन्देश वाहकका रूपमा काम गर्छ ।
साप्ताहिक श्रावण २०७५